Iko Kukosha kweConnector maringe neKufurira | Martech Zone
Chishanu, July 12, 2019 Chishanu, July 12, 2019 Douglas Karr
Isu tinoramba tichirwira mukati meiyo inokurudzira indasitiri ine zvisina maturo metric uye akakwirira manhamba. Ndanga ndichitsoropodza indasitiri kubva payakatangwa munhau dzezvemagariro izvo zviyero uye mapuratifomu haanyatso kuyera simba, ivo vanongo pima saizi yenetiweki, vateereri, kana nharaunda.
Ini pachangu ndine netiweki yakakura kwazvo… zvekuti kazhinji kacho isingadzoreki uye ndine nguva yakaoma yekusimudzira kubatana kwakanaka nevanhu vazhinji vandinoremekedza. Nekufamba kwenguva, vanhu nemakambani vanowanzo pinda mukati nekunze kwekutarisirwa patinoisa pfungwa kubhizimusi riripo. Dzimwe nguva isu tinobatana zvakare zvine chinangwa apo ini ndichivatsvaga seyakavimbika sosi pane musoro wandaishaya hunyanzvi pairi. Dzimwe nguva, ini ndinogona kungova pamusangano kana chiitiko uye ivo vanozoitika varipo uye isu tinotungidza hukama hwedu.
Mukati me network yangu, ini dzimwe nguva simba kutenga zvisarudzo zvevamwe vanhu vanobatana kana kunditevera… asi iyo nhamba iri pasi zvakanyanya. Ndine vashoma vevatengi vanovimba neni zvakazara uye ini ndinogona kutombovaitira sarudzo. Ndine vamwe vanhu munetiweki yangu vakatambanudza ruoko ndokuti ini ndakabatsira kufambira mberi nepuratifomu uye zano pasina kuita wega. Uyezve, zvakadaro, ndine vamwe vanovandira vandakafurira asi vasina kuigovana pachena uye ini ndisingazive nezvekurudziro zvachose. Ini ndinogara ndichinzwa kubva kumhinduro dzandakanyora nezvekuti ndiani akanditenda ndikati zvakatungamira kune chimwe chivakwa chekuziva kana kunyangwe mutengi mukuru. Dai vasina kundiudza, ini pachokwadi ndaisazoziva nezvazvo, zvakadaro.
Kazhinji kazhinji kupfuura kufurira sarudzo yekutenga, ini batanidza vanhu munetiweki yangu nevanhu ve simba. Nezuro, semuenzaniso, ndakasangana nepuratifomu iyo yandiri kuisa mukutaurirana neanokurudzira munharaunda yekushambadzira midhiya. Ini ndinovimbwa zvese neanokurudzira uye ndine chivimbo muchikuva, saka ndiko kubatana kukuru kuita. Ndine chokwadi chekuti zvinotungamira mukuvaka ruzivo uye imwe mari.
Saka, ini ndiri anokurudzira kana chinongedzo? Ndichiri ndakafurira vamwe kutenga sarudzo, ndinotenda ini ndiri yakawanda ye connector. Ndinoziva mapuratifomu, ndinoziva vanhu, ndinonzwisisa maitiro… saka ndinokwanisa kubatanidza tarisiro chaiyo kune vanhu chaivo kuvabatsira kuti vatore sarudzo yekutenga.
Dambudziko neizvozvo, chokwadika, nderekuti hapana chinobatika chinoratidzira cheichi muhukama hwehukama kana kubva kune chero chinokurudzira chikuva. Ndinoziva kukosha kwangu kwakakosha - kumwe kubatana kwandakaita kwakakonzera kuwanikwa chaiko kwekambani. Ini ndakabatanidzwawo nemari inodarika bhiriyoni yemadhora ekudyara nekutenga muindastiri yeMartech. Ini ndakabatsirawo gumi nemaviri evatengi nesarudzo yavo yevatengesi… izvo zvakakonzera mazana emamirioni emadhora mumari yakananga.
Handisi kutaura izvi kuti ndizvirumbidze… ndinowanzova mumwe wevanhu vazhinji vari muzvikwata izvi vachibatsira kufambisa sarudzo yekutenga. Uye ndanga ndichiita izvi kwemakumi mashoma emakore saka ndanga ndiri kutenderera block nguva shoma uye ndoziva zvandiri kuita. Ndiri mukuru chinongedzo.
Zvinobatanidza zvinopesana neVanokurudzira
Rega ndisvike padanho. Isu tinonyonganisa kukanganisa pamwe nekubatana uye inomutsa matambudziko maviri akasarudzika:
Kufuridzira dzimwe nguva zvinonyatso kubatanidza - kune makambani anotsvaga vanhu vakaita seni vane akakosha anotevera muindasitiri kana dunhu. Dzimwe nguva kukanganisa, dzimwe nguva kunoonekwa senge micro-pesheni (kana iwo manhamba ari madiki uye musoro wenyaya uri niche). Asi pamwe ivo havasi kukurudzira danho rekutenga… ivo vangori chinoshamisira chinobatanidza. Makambani anowanzoodzwa mwoyo mune idzi mari… sezvo dzisingakwanise kuburitsa zvakanangana nemari yaitarisirwa.
Zvinobatanidza zvine kukosha kunoshamisa zvakare - kune vanhu vane masaiti akakura pamhepo ari zviwanikwa zvakanaka zvekubatsira kubatanidza madhi - kubva kuvashambadziri, kumapuratifomu, kune vatengi - asi pane zvishoma nzira yekupa chero kukosha kune izvo zvinongedzo. Kana, semuenzaniso, ini ndakazivisa kambani yako kune anokurudzira uye iwe ukaisa mari muhukama ihwohwo ... izvo zvinogona kutungamira mukubudirira kukura ... uye chero mari inowanikwa (nenzira kwayo) inofungidzirwa kune iye anokurudzira. Zvisinei, pasina kubatana kwaisazomboitika.
Semunhu anoita bhizinesi rangu kubva paruzivo rweindasitiri yangu uye akaita mari yakakosha mumambure angu, ndinotambura nekuita zvizere simba iri randiinaro. Unoita mari sei iwe uri connector? Vamwe vevatengi vangu vanoziva kukosha mushure mekunge tave nehukama hwakareba-nguva uye ivo vaona yakadzika mhedzisiro.
Mamwe mapuratifomu mazhinji anouya kwandiri achitsvaga mhedzisiro mhedzisiro. Ndinoisa tarisiro zvakanakisa zvandinogona kuti kutengesa kwavo chigadzirwa kana sevhisi haisiyo yakakosha pfuma yandinounza… uye ivo vanowanzosiya kusiya kutanga chero kusangana neni. Kuona kugona, zvinoodza moyo… asi ndinonzwisisa kumanikidza kwavari pasi uye kuoma kwekupa kukosha kuhukama.
Paunoona nhamba hombe, iwe unogona kuyedzwa kukwereta munhu ane iwo manhamba se kuchinja. Ingo gara uchifunga kuti kukosha kweiyo hombe nhamba kunounza kungangorega kutengesa zvigadzirwa zvako kana masevhisi… kungave kuri kubatana kwavanounza kwauri.
Tags: zvabatanidzaDzokera paKukurudzirapasocial network